cookies sanduuqa barafka Automatic loogu talagalay cookies mashiinka samaynta - Shiinaha Shanghai Hanjue Makiinado
Description: cookie The loogu talagalay in la beddeli karaa noocyada design. Waxa ay u muuqataa siyaabo badan si ay u sameeyaan cookie ah, qaar ka mid ah dukaamada yar yar iyo hooyooyinka dhigi cuntada by gacanta, waxa uu leeyahay qiimo la yaab leh oo dadka da'da kala duwan sida cuntada this. Warka fiicani waxa weeye in HJ-860 mashiinka encrusting cuntada oo leh awood sare oo ka dhigi kara. Our injineer dari doonaa cut silig a on mashiinka dhigi cookies ah, sidaas badbaadin karo lacag ka dhigi cookies muuqaalka wanaagsan. Waxaad riix kartaa video ku arki sida mishiinka shaqeeyaa ah ...
Warka fiicani waxa weeye in HJ-860 mashiinka encrusting cuntada oo leh awood sare oo ka dhigi kara. Our injineer dari doonaa cut silig a on mashiinka dhigi cookies ah, sidaas badbaadin karo lacag ka dhigi cookies muuqaalka wanaagsan. Waxaad riix kartaa video ku arki sida shuqullada mashiinka iyo wax dhibaato ah fadlan la xiriir iibka our.
tirada model HJ-860
1) noocyo badan cookies wasakhahaasi loo qaabeeyay kartaa.
2) Mashiinka kartoo, waxaan ku dari kartaa nidaamyo mashiinka qaar ka mid ah oo ku saabsan mishiinka.
3) English, Chinese, af Carabi waa optional ..
4) tababar lacag la'aan ah waxaa lagu siin doonaa marka mashiinka baaritaanka macaamiisha.
Previous: Mashiinka qaadashada mochi jalaato Automatic
Next: kubad kalluunka si toos ah kubad hilib samaynta mashiinka
Mashiinka qaadashada bar midho Automatic taariikhda bar
cookies HJ-860 Eygan ayaa mashiinka la xirrira / loogu talagalay ...
kubad kalluunka si toos ah kubad hilib samaynta mashiinka